Wararka Maanta: Axad, Mar 10, 2019-Wasiir isku casilay dhimashada 11 carruur ah
Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in baaritaanno la sameeyay ay muujinayaan in ilmahaasi ay u dhinteen caabuq ka dhashay oksijiin la'aan mudadii u dhexeysay todobada ilaa sideedda bishan Maarso.
Ra'iisal wasaaraha dalkaasi Yuusuf Shahiid ayaa sheegay in baaritaan lagu hayo cisbitalkaasi ay dowladdu maamusho gaar ahaan farmashiyaha iyo habka faya-dhowrkiisa, Wasiirka iscasilay ayaa xilkaasi loo magacaabay afar bilood ka hor.
Ururka ay leeyihiin dhakhaatiirta carruurta ee Tunisia ayaa farriin uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay inay suuragal tahay in caabuqa ilmaha dilay uu ka dhashay waxyaabaha lagu duray.
Ururka ayaa sidoo kale dhaliilay "xaaladaha adag ee ay ku shaqeeyaan hawlwadeennada caafimaadka".
Adeegga caafimaadka Tunisia ayaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay kuwa ugu wanaagsan Waqooyiga Afrika, waxaana dakhli wanaagsan uu dalkaasi ka helaa dadka caafimaadka uga soo doonta dibedda.
Balse tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweyne Zayn al-Caabidiin Bin Cali sanadkii 2011, daryeelka caafimaad ee Tunisia ayaa waxaa ragaadiyay dhibaatooyinka dhanka maamulka iyo dhaqaalaha ah oo ay uga sii dartay dawo yaraan soo noq-noqotay.